ल्याक्टोफेरिन (LF) स्तनपायी दूधमा उपस्थित प्राकृतिक प्रोटिन हो र एन्टी-माइक्रोबियल गुणहरू प्रदर्शन गर्दै। S० को दशकदेखि यसको स्थापना भएदेखि यता ग्लाइकोप्रोटीनको उपचारात्मक मूल्य र प्रतिरोधात्मक क्षमतामा यसको भूमिका स्थापना गर्न असंख्य अध्ययनहरू भइरहेका छन्।
यद्यपि जवानहरूले आफ्नी आमाहरूलाई स्तनपान गरेर पूरक प्राप्त गर्न सक्दछन्, व्यावसायिक रूपमा बनाईएको ल्याक्टोफेरिन पाउडर सबै उमेरका लागि उपलब्ध छ।
1. ल्याक्टोफेरिन भनेको के हो?
ल्याक्टोफेरिन (१146897 68----9) ट्रान्सक्रिन परिवारसँग सम्बन्धित फलामको बाध्यकारी ग्लाइकोप्रोटीन हो। यो प्रोटिन एन्टिबडीमा समृद्ध छ र यो दुबै मानव र गाई दुधमा रहेको छ। यस बाहेक, यो धेरै जसो जैविक स्रावहरूको एक्स्ट्र्याक्ट हो जस्तै आँसु, लार, नाक तरल पदार्थ, अग्नाशय रस, र पित्त। शरीरले स्वाभाविक रूपमा ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज गर्दछ एक उत्तेजक उत्तेजनाको प्रतिक्रियामा।
तपाईंले एक बनाउन सक्नु अघि ल्याक्टोफेरिन किन्नुहोस्, पूरक यसको लायक छ कि छैन हेर्नका लागि यस कमेन्टरीको माध्यम एक पात लिनुहोस्।
ल्याक्टोफेरिनको रिच मात्रा कोलोस्ट्रममा हुन्छ, जुन बच्चा जन्माएपछि उत्पादन हुने पहिलो स्टिकी फ्लुइड हो। यो प्रसवोत्तरको पहिलो दुई वा तीन दिन भित्र दुधमा स्रावित हुन्छ। जे भए पनि कोलोस्ट्रमको स्राव निकटमा आयो, लेक्टोफेरिनको महत्वपूर्ण मात्रा अझै पनि संक्रमणकालीन र परिपक्व दुधमा उपलब्ध हुनेछ।
त्यसो भए, तपाईं बोवाइन कोलोस्ट्रमबाट ल्याक्टोफेरिन कसरी निकाल्नुहुन्छ?
मलाई ल्याक्टोफेरिनलाई छुट्ट्याउने एक सीधा प्रक्रियामा लैजान मलाई अनुमति दिनुहोस्।
पहिलो चरणमा दूधबाट मकै अलग गर्नु समावेश छ। मट्ठा तरल बाह्य उत्पादन हो जुन एक अम्लीय यौगिकको साथ दूध घुमाउने वा कोगुलेट गर्ने पछि रहन्छ। पृथकीकरण प्रक्रियाले हाइड्रोफोबिक अन्तर्क्रिया क्रोमाटोग्राफी र आयन-एक्सचेन्ज क्रोमैटोग्राफी प्रयोग गर्दछ र त्यसपछि सालिन समाधानको साथ क्रमिक अल्युशन हुन्छ।
बोवाइन कोलोस्ट्रम गाईबाट आउँदछ। यो प्रोटीन, एन्टिबडी, खनिज, भिटामिन, कार्बोहाइड्रेट, र फ্যাটहरूमा समृद्ध छ। यी प्यारामिटरहरूले कोलोस्ट्रमको चिकित्सीय मूल्य पुष्टि गरेका छन्, यसैले, मेडिकल डोमेनमा अनुसन्धान वैज्ञानिकहरूको बीच चासो लिन।
लैक्टोफेरिनको सामग्री कम हुने बित्तिकै प्रसवोत्तर समय बढ्यो, एक विकल्प स्रोत शिशुलाई सिफारिस गरिन्छ। उदाहरणका लागि लिनुहोस्, सामान्य LF जन्म पछि तुरुन्त 7-१-14 mg / ml हो। यद्यपि, एकाग्रता परिपक्व दूधको साथ लगभग १mg / ml ड्रप हुन सक्छ।
यदि तपाईं इम्युनोलोजिकल ल्याक्टोफेरिनमा रमाउन चाहानुहुन्छ भने तपाईंले बोवाइन कोलोस्ट्रम सप्लीमेन्टमा बैंक गर्नु पर्छ।
व्यवसायिक रूपमा बनाइएको ल्याक्टोफेरिन बल्क पाउडर बोवाइन कोलोस्ट्रमको उत्पादन हो। जे होस्, उत्पाद पागल गाई रोग बाट संक्रमित भइरहेको देखिन्छ जो केहि मानिसहरु को लागी एक चासोको विषय भएको छ। ठिक छ, म तपाईलाई आश्वसन दिन्छु कि यो अवस्था दुर्लभ छ यस बाहेक, केहि ल्याक्टोफेरिन बेबी सप्लीमेन्ट जेनेटिकली इञ्जिनियर गरिएको चामलका अर्क हुन् जसले लैक्टोजप्रति असहिष्णु व्यक्तिहरूको पक्ष लिन्छ।
2. ल्याक्टोफेरिन पाउडरलाई पूरकको रूपमा किन प्रयोग गर्ने, ल्याक्टोफेरिन बेनिफिटहरू हुन्?
Cutibacterium र propionibacterium प्राय अनुहारको लागि जिम्मेवार छन्। ल्याक्टोफेरिनले फलामका यी ब्याक्टेरियाहरूलाई वञ्चित गर्दछ र उनीहरूको प्रभावहरूलाई कम गर्दछ।
केही अवस्थाहरूमा, फ्रि रेडिकल र प्रतिक्रियाशील अक्सिजन प्रजातिहरूले कोषहरू र डीएनए क्षतिको चोट पुर्‍याउँछन्। अक्सिडेटिभ तनावका कारण, सूजन आउन सक्छ र एक्नेको बृद्धिमा असर पर्दछ। अनुसन्धान वैज्ञानिकहरूका अनुसार ल्याक्टोफेरिन एक शक्तिशाली एन्टी-ऑक्सीडन्ट हो, यसकारण, स्वतन्त्र रेडिकलसँग लड्न सक्ने सम्भाव्यता।
भिटामिन ई र जिंकसँगै ल्याक्टोफेरिन लिनाले अनुहारको घाव र कमोडोन तीन महिनामा कम गर्दछ।
यस बाहेक, सूक्ष्म प्वालहरू रोकेपछि एक्ने र सिस्टको गठनलाई सीधा ट्रिगर गर्दछ। ल्याक्टोफेरिनको एन्टी-भड़काऊ गुणहरूले घावहरूको चाँडो निको पार्ने ग्यारेन्टी गर्दछ।
त्वचा विशेषज्ञहरु तपाईको पेटको स्वास्थ्य तपाईको छाला को प्रतिबिम्ब हो भन्ने तथ्यमा जोड दिन्छन्। उदाहरणको लागि, यदि तपाईंको ग्यास्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्र्याक लीक वा अस्वस्थ छ भने, सबै प्रकारको अनुहारको क्रीम वा विश्व-स्तरीय प्रोबायोटिक्सको प्रयोगले छालाको जलन, खेलकुद, वा एक्जिमा समाधान गर्दैन। ल्याक्टोफेरिन सेवन गर्नाले पाचन पथमा हानिकारक सूक्ष्मजीवहरू फ्लश हुनेछन् जबकि उपयोगी बिफिडस फ्लोराको गतिविधिको प्रचार गर्दै।
एक्नेको उपचारको अलावा ल्याक्टोफेरिनले सोरायसिसका लक्षणहरू हटाए र न्यूरोपैथिक खुट्टाको अल्सरबाट पुन: प्राप्तिलाई गति प्रदान गर्‍यो, जुन मधुमेह बिरामीहरूमा व्याप्त छ।
असंख्य अध्ययनहरूले पुष्टि गर्दछ कि ल्याक्टोफेरिन (LN) ले भाइरस, ब्याक्टेरिया, परजीवी, र फ fun्गल संक्रमणलाई शरीरमा आक्रमण गर्नबाट रोक्दछ। कम्पाउन्डले यी सूक्ष्मजीवहरूलाई बाइन्डि by गरेर, उनीहरूको सेल संरचनालाई अस्थिर पार्दै, र सेलुलर रिसेप्टर्सलाई ब्लक गरेर काम गर्दछ।
एउटा विशेष अध्ययनमा वैज्ञानिकहरूले त्यो टिप्पणी गरे ल्याक्टोट्रान्सफेरिन (LTF) मानव संस्करण भन्दा हर्पेस भाइरस रोक्न मा अधिक कुशल थियो। भिट्रो अध्ययनमा यो पनि संकेत गर्दछ कि यो पूरकले एचआईभीको प्रभावलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्दछ।
थोरै बढी डोजमा, ल्याक्टोफेरिनले हेपाटाइटिस सीको भाइरलन्स व्यवस्थापन गर्न कार्य गर्दछ हेपेटोलोजी अनुसन्धान, यस उपचारले इन्टर्ल्यूकिन १ 18 को अभिव्यक्ति बढाउँदछ, हेपाटाइटिस सी भाइरस फिर्ता ड्राइभको लागि जिम्मेवार प्रोटीन। अधिकतम दक्षताको लागि, बिरामीहरूले दिनको १.1.8 देखि 3.6 ग्राम पूरकको पूरक लिनु पर्छ। कारण यो छ कि ल्याक्टोफेरिनको कम खुराकले भाइरल सामग्रीमा कुनै फरक पार्दैन।
त्यहाँ अनुमानहरु छन्, जो LF लाई हेलिकोबेक्टर पाइलोरी संक्रमणको उपचार मान्दछ। जब तपाइँ तपाइँको पुरानो अल्सर उपचारको साथ पूरक स्ट्याक, संभावना छ कि औषधि अधिक प्रभावी हुनेछ। यो दावी अनुसन्धानकर्ताहरु बीच हड्डी झगडा भएको छ किनकि लेक्टोफेरिन पाउडर प्रयोग गर्ने नुस्खेको खुराकको अभावमा बहुमत अवैध मानिन्छ।
आइरन मेटाबोलिज्मको नियमन
ल्याक्टोफेरिनले शरीरमा फलामको स concent्द्रता मात्र नियमित गर्दैन तर यसको शोषण पनि बढाउँदछ।
त्यहाँ चलिरहेको क्लिनिकल अध्ययनले गर्भावस्थामा फलामको कमी एनीमियामा लौह सल्फेट बिरूद्ध एलएफको प्रभावकारिता तुलना गर्न खोजेको छ। खैर, परीक्षणबाट, ल्याक्टोफेरिन हेमोग्लोबिन र रातो रक्त कोशिकाहरूको गठनलाई उत्तेजित गर्न अझ बढी शक्तिशाली साबित भयो।
ग्लाइकोप्रोटीन खपत गर्ने महिलाहरूमा शून्य साइड इफेक्टको साथ इष्टतम फलामको स्तर हुन्छ। ल्याक्टोफेरिनले गर्भपात, प्रारम्भिक जन्म, र कम जन्मदरको सम्भावना कम गर्न कार्य गर्दछ।
तसर्थ, यो स्पष्ट छ कि यो गर्भवती आमा र बच्चा जन्माउने उमेरका महिलाहरूको लागि आदर्श पूरक हो जसले आफ्नो sesतुमा हुँदा केही आइरनहरू गुमाउँछन्। शाकाहारीहरू र बारम्बार रगत दाताहरूले ल्याक्टोफेरिन सप्लीमेन्टबाट पनि फाइदा लिन सक्दछन्।
स्वस्थ जठरांत्र पथ
ल्याक्टोफेरिन बच्चा पूरकले डिटोक्सिफाइ गर्दछ र पेटमा स्वस्थ रहन्छ। यो हानिकारक ब्याक्टेरियाहरूबाट छुटकारा पाउन सक्छ जो सूजनका लागि जिम्मेवार हुन्छन्। उदाहरण को लागी, यी सूक्ष्मजीवहरु को लागी बहुसंख्यक गैस्ट्रोएन्टेरिटिस केसहरु र एन्टरोकोलाइटिस हो, जसले आंत्र भित्तामा क्षति पुर्‍याउँछ जुन अकाल मृत्यु निम्त्याउँछ। यदि कुनै कारणका लागि, तपाईंको बच्चा स्तनपान गरीरहेको छैन भने, यो सिफारिस गरिन्छ कि तपाईं गोजेन ल्याक्टोट्रान्सफेरिन (LTF) मा सर्नुहोस्।
3. बच्चामा ल्याक्टोफेरिनले फाइदा पुर्‍याउँछ
ल्याक्टोफेरिन बच्चा पूरकले नवजात शिशुहरूको पेटमा सूक्ष्मजीवहरूको विकासमा बाधा उत्पन्न गर्दछ। यी सूक्ष्मजीवहरुमा एशेरिचिया कोली, बेसिलस स्टेअर्थोर्मोफिलस, स्टेफिलोकोकस एल्बस, क्यान्डिडा एल्बिकान्स, र स्यूडोमोनस एरुगिनोसा पर्छन्। धेरै अध्ययनहरूले ल्याक्टोफेरिन बल्क पूरकको दैनिक सेवनले बच्चाहरूमा नर्भोइरल ग्यास्ट्रोएन्टेरिटिसको सम्भावना कम गर्ने तथ्यलाई ब्याक अप गर्दछ।
पेटमा अझै पनि, एलएफले लिम्फेटिक फोलिकल्सको बृद्धिलाई व्यक्त गर्दै एन्डोथेलियल कोषहरूको विस्तारलाई बढावा दिन्छ। त्यसकारण, यो स्पष्ट हुन्छ कि ल्याक्टोफेरिन पूरक बिग्रेको आन्द्रा म्यूकसको लागि पर्चा हुन सक्छ।
नवजात शिशुहरूका लागि स्तनपान भनेको फलामको प्रमुख स्रोत हो। जे होस्, बाल रोग विशेषज्ञहरूले सुझाव दिन्छन् कि फलामको थप पूरक आवश्यक छ किनकि आमाको दुधमा यस खनिजको थोरै मात्रा हुन्छ।
मलाई व्याख्या गर्न अनुमति दिनुहोस् किन LF कमपूर्व शिशुहरू र कम जन्मवेटाको साथ जन्मेका शिशुहरूका लागि एक पूरक पूरक हो। सामान्यतया, यो समूह फलामको कमी एनीमियाको लागि अत्यधिक संवेदनशील हुन्छ। ल्याक्टोफेरिन बच्चा पूरकको व्यवस्था गर्नाले बच्चाको प्रणालीमा हेमोग्लोबिन र रातो रक्त कोषहरू बढ्ने छन्। यसबाहेक, अध्ययनहरूले पत्ता लगायो कि फलामका पूरकहरूले शिशुको न्यूरोलॉजिकल विकासलाई बढवा दिन्छ।
कहिलेकाँही हानिकारक ब्याक्टेरियाहरू जस्तै ईकोली नवजात आन्द्रा मार्गमा रहेको फलाममा फिड गर्दछ। ल्याक्टोफेरिन लिनाले फलामका जीवाणुहरूलाई वञ्चित गर्दछ र तिनीहरूलाई नष्ट गर्दछ जबकि यो सुनिश्चित गर्दछ कि होस्टले सबै उपलब्ध खनिजहरू प्राप्त गर्दछ।
LF ले बच्चाको प्रतिरक्षा प्रणालीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। यी ल्याक्टोफेरिन पाउडरमध्ये केहीले म्याक्रोफेज, इम्युनोग्लोबुलिन, एनके कोषहरू, र टी लिम्फोसाइट्सको गतिविधिको बृद्धि समावेश गर्दछ जुन नवजात प्रतिरक्षाको लागि जिम्मेवार हुन्छ। अरू के छ, LF को प्रशासनले एलर्जीनको प्रति संवेदनशीलता कम गर्दछ।
4. ल्याक्टोफेरिनले कसरी प्रतिरक्षा प्रणाली सुधार गर्छ?
अनुकूलक र इम्यून इम्यून प्रकार्यहरू बीच मध्यस्थता गर्दछ
जन्मजात प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाको लागि, ल्याक्टोफेरिनले धेरै तरिकाले कार्य गर्दछ। उदाहरण को लागी, यसले प्राकृतिक हत्यारा कोषहरु (NK) र न्यूट्रोफिल को गतिविधिहरु लाई बृद्धि गर्दछ। प्रोटीन phagocytosis बढावा दिन्छ र म्याक्रोफेज को वृद्धि को कारण।
अनुकूलन प्रतिक्रियाको लागि, LF T-सेलहरू र B-सेलहरूको मॉडुलनमा सहयोग गर्दछ। ज्वलनशील संकेतको मामलामा, दुवै जन्मजात र अनुकूलन प्रतिरोधात्मक कार्यहरू घटनालाई काउन्टर गर्न मर्ज गर्दछ।
ल्याक्टोफेरिनले प्रो-इन्फ्लेमेटरी साइटोकिन्स र इन्टरल्युकिन १२ को उत्पादनलाई नियमन गर्छ, जसले इंट्रासेल्युलर रोगजनकको बिरूद्ध प्रतिरक्षात्मक गुणहरू प्रदर्शन गर्दछ।
सिस्टिमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पान्स सिन्ड्रोम (SIRS) मा मध्यस्थता गर्दछ
को भूमिका ल्याक्टोफेरिन पाउडर प्रतिक्रियाशील अक्सिजन प्रजाति (आरओएस) लाई दबाउन मामीको सूजन र क्यान्सरको विकाससँग यसको सम्बन्धको अध्ययन गर्न आधारभूत भएको छ। आरओएस मा वृद्धि अपोपोटोसिस वा सेलुलर चोटको कारण भडकाउने अवस्थाको उच्च जोखिममा अनुवाद गर्दछ।
सूक्ष्मजीवहरूको बिरूद्ध प्रतिरक्षा
ल्याक्टोफेरिनको एन्टि-माइक्रोबियल गुणले ब्याक्टेरिया, भाइरल, परजीवी, र फgal्गल संक्रमण भर गर्दछ।
माइक्रोब्स फल्छ र विकास र अस्तित्वका लागि फलाममा निर्भर गर्दछ। जब उनीहरूले होस्टलाई आक्रमण गर्छन्, LF ले उनीहरूको फलामको उपयोग क्षमतालाई असफल बनाउँछ।
संक्रमणको प्रारम्भिक चरणको अवधिमा ल्याक्टोफेरिन (LF) दुई निश्चित तरिकामा विदेशी उत्तेजनालाई रोक्नको लागि कदम चाल्दछ। प्रोटीन या त सेलुलर रिसेप्टर्स ब्लक वा भाइरस संग बाँध्न हुनेछ, यसैले, होस्ट मा आफ्नो प्रवेश रोक्न। ल्याक्टोफेरिनका अन्य एन्टि-माइक्रोबियल कार्यहरूमा रोगजनकको सेल मार्ग अस्थिर पार्ने वा उनीहरूको कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिजम रोक्नु समावेश छ।
धेरै अध्ययनहरू लेक्टोफेरिन पाउडरले हर्पेस भाइरस, एचआईभी संक्रमण, ह्युमन हेपेटाइटिस सी र बी, इन्फ्लूएन्जा, र हन्टावायरसको व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्दछ। यस बाहेक, पूरकले अल्फावायरस, रोटाभाइरस, मानव प्यापिलोमा भाईरस र अन्य धेरैको विस्तारमा रोक लगायो।
केहि केसहरूमा ल्याक्टोफेरिनले सबै संक्रमणहरू फ्लश गर्न सक्दैन तर तपाई यो निश्चित हुन सक्नुहुन्छ कि यसले अवस्थित भाइरल भारको गम्भीरतालाई कम गर्दछ। अघिल्लो अध्ययनमा, एलएफले सार्स स्यूडोभाइरसलाई रोक्न प्रभावी भएको थियो। SARS-CoV-2 SARS-CoV जस्तै कक्षामा पर्दछ, त्यहाँ लैक्टोफेरिनले COVID-19 को भाइरलन्स कम गर्ने सम्भावना छ।
यद्यपि चिकित्सकहरूले यस कुरालाई रोक्दछन् कि तपाईंको प्रतिरक्षा प्रकार्य बढाएर कोरोनाभाइरसबाट जोगाउँदैन, ल्याक्टोफेरिन पूरक लडाईमा सहयोग गर्दछ। जे भए पनि, ती समान चिकित्सकहरूले बुढापाका र कम प्रतिरक्षा भएका मानिसहरूलाई COVID-19 करारको उच्च जोखिममा रहेको देखेका छन्।
5. ल्याक्टोफेरिन पाउडर प्रयोग र अनुप्रयोग
ल्याक्टोफेरिन बल्क पाउडर अनुसन्धान वैज्ञानिकहरु र विद्वानहरु को लागी उपलब्ध छ जसले मानव शरीरमा यसको औषधीय मूल्य स्थापना गर्न चाहन्छ। यो रोग रोकथाम, पोषण पूरक, खाना र फार्मास्युटिकल एन्टिसेप्टिक्स, र सौन्दर्य प्रसाधन को व्यापक अनुप्रयोग संभावनाहरु छन्।
तपाईको विश्लेषण र प्रयोगशालाको प्रयोगको लागि वैध ल्याक्टोफेरिन पाउडर आपूर्तिकर्ताबाट कम्पाउन्ड स्रोत सुचित गर्नुहोस्।
ल्याक्टोफेरिन पाउडर मा प्रयोग गर्नुहोस् बच्चा दुध पाउडर
शिशु पाउडर सूत्र आमाबाट वास्तविक स्तन दुधको बायोकेमिस्ट्री प्रतिबिम्बित गर्न निरन्तर सुधार गर्दछ। ल्याक्टोफेरिन आमाको दुधमा दुई प्रशस्त प्रोटिन हो। यो बच्चालाई सबै प्रकारका फाइदाहरू ल्याउनको लागि लोकप्रिय छ जसमा प्रतिरक्षा, क्यान्सरको रोकथाम, र अन्यमा स्वस्थ हड्डीहरूलाई प्रमोट गर्नका लागि फलामको बाध्यकारी समावेश छ।
ल्याक्टोफेरिन आमाको प्रारम्भिक दूधमा प्रशस्त मात्रामा हुन्छ जुन कोलोस्ट्रमको रूपमा चिनिन्छ। कोलोस्ट्रममा परिपक्व स्तन दुधको तुलनामा मिलिलिटर भन्दा दुई गुणा बढी हुन्छ। यो सly्केत गर्नका लागि कान्छो शिशुहरूलाई अधिकतम विकासको लागि ल्याक्टोफेरिनको उच्च सांद्रता आवश्यक पर्दछ।
शिशुको प्रतिरक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याक्टोफेरिन कम्पोनेन्ट शिशुको फार्मायुलरमा समर्थन गर्दछ। प्रोटीनले शिशुको प्रतिरक्षा प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण कार्य गर्दछ र पहिलो एन्टी-भाइरल र एन्टि-माइक्रोबियल रक्षा प्रणाली प्रतिनिधित्व गर्दछ। कुञ्जी एन्टी-माइक्रोबियल प्रभाव अधिकतर आयरन-आयन चेलेसनको बारेमा ल्याइएको हुन्छ, जुन ब्याक्टेरियाको विकासको लागि महत्त्वपूर्ण छ। यसका साथै ल्याक्टोफेरिनले एन्टिऑक्सिडन्टको रूपमा पनि काम गर्दछ भनेर विश्वास गरिन्छ जसले प्रतिरक्षा कोषहरूको भेदभाव, प्रसार र सक्रिय बनाएर प्रतिरक्षाको प्रतिक्रियालाई सुदृढ पार्न सक्छ।
6. ल्याक्टोफेरिन साइड इफेक्टहरू
LF pivots को सुरक्षा केहि कारकहरुमा।
ल्याक्टोफेरिन थोक खुराक चन्सी हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, जब पूरक गाईको दुध को एक व्युत्पन्न छ, तपाईं आत्मविश्वास एक वर्ष को लागी उच्च मात्रा मा उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। जे होस्, जब उत्पादन चामलबाट शुरु हुन्छ, सम्भावना यो छ कि लगातार दुई साताको लागि ओभरड्सिंग गर्दा केही नकारात्मक अपचर्स्ट हुन्छ।
विशिष्ट ल्याक्टोट्रान्सफेरिन (LTF) साइड इफेक्टहरू समावेश गर्दछ;
प्रायः औषधीय पूरकहरू भन्दा फरक, ल्याक्टोफेरिन गर्भवती र स्तनपान गराउने आमाहरूलाई लागि सुरक्षित छ।
ल्याक्टोफेरिन साइड इफेक्टलाई बाइपास गर्न, २००mg र 200mg बीचको एक खुराक सिफारिस गरिएको छ। तपाईंले यसलाई दुईदेखि तीन महिनासम्म लिन सक्नुहुनेछ। दुर्लभ मामिलाहरूमा, अवधि छ महिनासम्म जान सक्छ।
7. ल्याक्टोफेरिनबाट कसले फाइदा लिन सक्छ?
ल्याक्टोफेरिनले दुबै आमा र शिशुलाई फाइदा पुर्‍याउँछ।
गर्भावस्था अवधिमा, यो पूरक प्रशासित गर्नाले भ्रुणको आकार र यसको जन्म वजनमा सकरात्मक प्रभाव पार्दछ। यदि आमा दुग्धपानको अवधिमा ल्याक्टोफेरिनको खुराक जारी राख्छिन् भने, उनको स्तनको दुध उत्पादनमा उल्लेख्य सुधार हुनेछ। यसबाहेक, बच्चा स्वस्थ शरीरको वजन कायम गर्न कोलोस्ट्रममा अप्रत्यक्ष रूपमा गर्व गर्दछ।
शिशु र युवा बच्चाहरू जो स्तनपान गर्दैनन् वा मिश्रित छैनन्
ल्याक्टोफेरिन पूरकले सुनिश्चित गर्दछ कि शिशुले शक्तिशाली प्रतिरोधात्मक प्रणाली विकास गर्दछ जबकि नाजुक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पथलाई एलर्जीबाट बचाउँछ। यसका साथै पूरकले रेचकको रूपमा कार्य गर्दछ, शिशुको पहिलो आन्द्रा आन्दोलनमा सहयोग गर्दछ। कोलोस्ट्रममा समृद्ध शिशु फार्मुलाहरू स्थानीय र अनलाइन ल्याक्टोफेरिन पाउडर आपूर्तिकर्ताहरूबाट उपलब्ध छन्।
फलामको अभाव एनीमिया
ल्याक्टोफेरिन पूरकले हेमोग्लोबिन, रातो रक्त कोशिका र फेरीटिनको स्तरमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्छ। यद्यपि अधिकांश मानिसहरूले फलामको सल्फेट प्रयोग फलामको अभावको प्रतिरोध गर्न, धेरै अनुसन्धान अध्ययनहरूले ल्याक्टोफेरिन बढी सामर्थ्यवान छ भनेर पुष्टि गरिरहेका छन्।
यदि तपाईं शाकाहारी हुनुहुन्छ वा बारम्बार रगत दाता हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई कम हीमोग्लोबिन र फेरीटिन स्तरहरूको लागि अपर्याप्त फलामको खानाहरू चाहिन्छ। अन्यथा, तपाईं एक राम्रो ल्याक्टोफेरिन अनलाइन विक्रेताहरूबाट खरीद गर्न सक्नुहुन्छ।
कम प्रतिरक्षा भएका मानिस
ल्याक्टोफेरिनले संक्रामक जीवाणुहरूको जाँच गरेर र ब्याक्टेरिया र भाइरसहरूको प्रसारलाई रोक्दै रोगजनकहरूको विरूद्ध शरीरको रक्षा गर्छ। कम्पाउन्ड सक्रिय रूपमा एक होस्टको प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाहरू निगरानीको लागि जिम्मेदार सaling्केतक मार्गहरूको मोडुलनमा समावेश छ।
ल्याक्टोफेरिनले मध्यस्थको रूपमा काम गर्दछ, अनुकूल र जन्मजात प्रतिरक्षा प्रकार्यहरू बीचको अन्तरक्रियाहरूलाई ब्रिज गर्दै र समन्वय गर्दछ। उदाहरण को लागी, यो न्यूट्रोफिल र म्याक्रोफेज को upregulation द्वारा phagocytic गतिविधिहरु लाई सुधार गर्दछ। अनुकूलन प्रतिरोधात्मक प्रणालीको लागि, यस कम्पाउन्डले क्रमशः सेल-मध्यस्थता र न्युमर प्रतिरक्षा अभिव्यक्त गर्ने टी-कक्षहरू र बी-कक्षहरूको परिपक्वतालाई गति दिन्छ।
8. आईजीजीको साथ ल्याक्टोफेरिन
ल्याक्टोफेरिन जस्तै, आईजीजी वा इम्युनोग्लोबुलिन जी स्तनधारी दुधमा एक सुरक्षात्मक एंटी-माइक्रोबियल प्रोटीन हुन्छ।
ल्याक्टोफेरिन र आईजीजीको बीचको सम्बन्धको व्याख्या गर्न धेरै अध्ययनहरू उपलब्ध छन्।
कोलोस्ट्रममा ल्याक्टोफेरिनको एकाग्रता आईजीजी भन्दा धेरै उच्च छ। अनुसन्धान वैज्ञानिकहरूका अनुसार धेरै कारकहरूले दूधमा यी प्रोटीनहरूको मात्रालाई असर गर्छन्।
उदाहरण को लागी, दुबै ल्याक्टोफेरिन र IgG तातो र पाश्चराइजेशनको लागि संवेदनशील छन्। इम्युनोग्लोबुलिन जीले १०० डिग्री सेल्सियस सम्मको तातो उपचारको सामना गर्न सक्छ तर केहि सेकेन्डको लागि। यसको विपरीत, ल्याक्टोफेरिन बिस्तारै तापक्रमको बृद्धिसँगै घट्छ जबसम्म यो पूर्णतया १०० डिग्री सेल्सियससम्म डिग्रेड हुँदैन।
यी कुराको आधारमा, तपाईंले याद गर्नुपर्दछ कि नवजात दुध प्रशोधन गर्दा समय र तातो तापक्रम प्रमुख विचार हो। चूंकि दुध पाश्चराइजेसन विवादको बिषयमा परेको छ, धेरै जसो मानिसहरू ड्राई-फ्रीज गर्ने संकल्प गर्छन्।
को एकाग्रता Lactoferrin (१146897 68-9--)) जन्म दिए पछि चरम सीमामा छ। प्रसवोत्तर समय बढ्दै जाँदा, यो प्रोटिन बिस्तारै घट्दै जान्छ, सायद कोलोस्ट्रममा कमीको कारण। अर्कोतर्फ, दुध निकाल्ने अवधिभरि इम्युनोग्लोबुलिन जीको स्तरमा झन्डै नगन्य।
यद्यपि धेरै ल्याक्टोफेरिन स्तनपायी दुधमा बन्द हुन्छ, यसको एकाग्रता आईजीजी भन्दा बढी हुनेछ। यो तथ्य अझै पनी खडा छ कोलोस्ट्रममा, स transition्क्रमित, वा परिपक्व दुधमा।
यामची, K., एट अल। (२००)) बोवाइन ल्याक्टोफेरिन: संक्रमण र संक्रमण बिरूद्ध कार्यको लाभ र संयन्त्र। जीव रसायन र सेल जीवविज्ञान।
जेफ्री, KA, एट अल। (२००)) प्राकृतिक इम्यून मॉड्यूलेटरको रूपमा ल्याक्टोफेरिन। वर्तमान फार्मास्यूटिकल डिजाइन।
Lepanto, एमएस, र अन्य। (२०१ 2018)। एनीमिया र एनीमियाको उपचारमा ल्याक्टोफेरिन मौखिक प्रशासनको प्रभाव गर्भवती र गैर-गर्भवती महिलाहरूमा संक्रमणको एनीमिया: एक अन्तर्क्रियात्मक अध्ययन। इम्युनोलोजी मा फ्रंटियर्स.
सुनार, SJ, आदि। (१ 1982 XNUMX२) आईजीए, आईजीजी, आईजीएम र ल्याक्टोफेरिन मानव दूधको सामग्री प्रारम्भिक स्तनपानको समयमा र प्रशोधन र भण्डारणको प्रभाव। खाद्य संरक्षण पत्रिका
स्मिथ, केएल, कोनराड, एचआर, र पोर्टर, आरएम (१ 1971 .१)। ल्याक्टोफेरिन र आईजीजी इम्युनोग्लोबुलिनहरू इनभोलुटेड बोवाइन स्तन ग्रंथिहरूबाट। डेअरी विज्ञान को पत्रिका।
सान्चेज, L., Calvo, M., र ब्रोक, JH (१ 1992 XNUMX २)। ल्याक्टोफेरिनको जैविक भूमिका। बचपन मा रोग को अभिलेखहरु।
नियाज, बी, एट अल। (२०१ 2019) ल्याक्टोफेरिन (LF): एक प्राकृतिक एंटी-माइक्रोबियल प्रोटीन। खाद्य गुणहरूको अन्तर्राष्ट्रिय जर्नल।